Dutchtown, St. Louis ရှိအမဲဆိုင်များ• MO • DutchtownSTL.org
Dutchtown နေရာများ: အသားဆိုင်
México vive aquí! Carniceria Latino Americana ကုန်စုံ, အမဲသတ်သမားရဲ့ကောင်တာများနှင့်ထို့ထက်ပို။ ပေးထားသည်။
Carniceria Latino Americana အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
México vive aquí! Carniceria Latino Americana အစားအသောက်ဆိုင်, အမဲသတ်သမား၏ကောင်တာနှင့်ပိုပြီး။
5412 အက်စ်က Grand Blvd.
Don's Meat Market သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပိုင်ရှင်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဝက်သားခေါက် ၂ လုံးသို့မဟုတ် ၂၀၀ အမဲသားပေါင် ၂၀၀ လိုအပ်ပါကသင်သည် Don's သို့လာနိုင်သည်။ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေအကြီးစားခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်စီးပွားရေးအမိန့်များကိုကြိုဆိုသည်။ Don's Meat Market သည်ရှေးဟောင်းအမဲလိုက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးသူတို့၏ထူးခြားသောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဂုဏ်ယူကြသည်။
Don's Meat Market အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
ဒိန်းမတ် သောနေရာများ အသားဆိုင်